Baolina kitra :: Manameloka an’ireo mpanambany ny klioba malagasy ny Fosa Juniors • AoRaha
Baolina kitra Manameloka an’ireo mpanambany ny klioba malagasy ny Fosa Juniors
Nanamafy ny olana nisy teo amin’ny fifindran’i Andriamirado Arohasina na i Dax, mpilalao malagasy nandeha nila ravinahitra any Afrika Atsimo tamin’ny taona 2018, ny Fosa Juniors FC, nisy azy teo aloha, omaly, tany Mahajanga. Manameloka ny klioba naka azy itsy farany sy ireo klioba vahiny manambany an’ireo mpilalao sy ny taranja baolina kitra malagasy.
“Manameloka an’ireo klioba any ivelany izay manaratsy sy manambany ny klioba malagasy izahay. Miasa isan’andro ireo mpitondra an’ireo klioba malagasy. Maro ireo matihanina mitady ny hampitombo ny lentan’ireo mpilalao malagasy”, hoy ny fanazavan’i Ando Harivola, sekretera jeneralin’ny Fosa Juniors FC.
Nangataka ny hifampiresaka sy hifampiraharaha amin’ny Kaizer Chief izy ireo, hoy ity sekretera jeneraly ity nanamafy ny voalazany, tamin’i Dax, tamin’ny fotoana tany Afrika Atsimo saingy izahay indray no nahazo tsiny. Fanakianana no azonay satria hoe mbola tsy matihanina, hono, ny klioba malagasy.
Tsiahivina fa voasazy tsy afaka mandray sy mandefa mpilalao mandritra ny roa taona ny Kaizer Chief. Handoa lamandy 157 572 000 ariary kosa i Dax miampy tsy filalaovana mandritra ny efa-bolana noho io fifindrana tsy ara-dalàna io.
Basket-ball – Africa league :: Miresaka amin’ireo mpilalao vahiny maro ny GNBC
Baolina kitra – CAN 2021 :: “Tsara noho ny tany Ejypta ny Barea nasiana fanovana”, hoy i Nicolas Dupuis